जयदेश श्रेष्ठ | साहित्य संसार
लेखक: जयदेश श्रेष्ठ
जयदेश श्रेष्ठ समकालीन नेपाली साहित्यमा सक्रिय नाम हो । कथा, कविता, लेख निबन्ध लगायत नेपाली साहित्यका विविध विधाहरुमा कलम चलाउने जयदेश श्रेष्ठको इमेल – jaya_desh67@yahoo.com हो ।
कहाँ चुक्यो ? आज मेरो देश
हामी नेपालीहरू सपना राम्रो देख्छौ ! सपना पुरा हुने दिन कहिले आउला ? यो स्टेटस फेसबुकमा अपलोड गरेपछि साथीहरूको प्रतिक्रिया जस्तै आए पनि मनमा भने अनेकौ कुराहरू खेलिरहयो । प्राकूतिक श्रोत र सम्पदाको धनी देश नेपाल, आज उजाड भएको छ । श्रुतु परिवर्ततनसँगै गर्मीले तलाउ […]
सत्ता परिवर्तन र स्वतन्त्रताले मात्र देश विकास हुँदैन
आँखाले हेर, मनले पढ, विवेकले सोच, सुनेको, लेखिएको सबै साँचो हुँदैन । नेताहरू सबै भ्रष्ट छैनन्, देश बनाउने भन्ने,ठुला नेताहरू सबै देशभक्त होइनन् । देशका जनताहरू लडाएर,सडक तताएर, भौतिक संम्पति जलाएर, बन्द हडताल घर्ना र बिरोध गरेर,सत्ताको खेलमा देश विकास हुँदैन । मान्छेको जीवन एक […]
मैले पढेको थिएँ, देखेको थिएँ, सुनेको थिएँ, गौरव गाथा बोकेको, वीर गोर्खालीको मेरो देश, आज, काँतर अभागीहरू बाँचेको छ यहाँ, साहसी र मुर्खहरू शहिद भएको छ यहाँ, लुच्चा फटाहा र जालीहरूले चलाएको मेरो देश, लोकतन्त्र ल्यायो रे, गणतन्त्र आयो रे, प्रजातन्त्रको नाममा, आन्दोलन जन आन्दोदन, […]
आमा शब्द आफैमा महान् ! जति नै बुबा शब्दलाई उच्चारण गरे पनि आमाको स्थान लिन सक्दैन । दुर्घटना पर्दा आमा, बिरामी हुँदा आमा,केही प–र्यो कि आमा ! किन प्यारो लाग्छ मेरी आमा ? नौ महिना गर्भमा राखेर आफ्नो स्तनपान गराएर हुर्काएका सन्तानहरूले जसै गरे पनि […]
अमेरिकी दुतावासको प्रागणमा नेपाली दश जोडीहरू आज भिसा लिनको लागि सभ्य, अनुशासित तवरले सु-सज्जित भएर बसेका छन । ठिक दश बजे भिसा टिम अमेरिकनहरू हामीलाई नमस्ते, नमस्ते भन्दै अघि बढे । हामीलाई भित्र जान पास दिए । हामीभन्दा अगाडि सिँढीओ साहेबको जोडिरहेछ साधारण परिचय भयो […]
नाम चलेको सरकारी स्कुलको दुर्दशा, त्यही स्कुलमा पढेकाहरु सभासद, मन्त्रि,डाक्टर ,इन्जीनीयर,ठूला ठूला उच्च पदमा पुगेका छन् । आज त्यही स्कुलमा मुस्किलले ४०,५०जना बिधार्थीहरु पढने गर्छन् । शिक्षकहरुका लागी तलब खाने मेसोको लागी मात्र । सितैमा पढ्न पाउने सरकारी स्कुलमा जहाँ कार्यरत पियन हर्केका भाई बहिनी […]
शिक्षाको ज्योति प्रोफेसर र स्वास्थका देबी नर्स यी दुई श्रीमान् श्रीमतीमा कहिले मेलमिलाप छैन । श्रीमती ढिला आउँदा अनेकौ शंका उपशंका हस्पिटलमा डीयुटी अदल, बदलमा शंका गरी स्पस्टिकरण दिदैमा हैरान । प्रोफेसर क्याम्पस जादा सजिएर चट्ट परेर जानै नहुने । मोबाईलमा केटी फोन आउनै नहुने […]
साहित्य संसार कथा
सधै अफिस जाँदा बस बिसौनिमा देखिने नानीलाई मनले चाहेर पनि मेरो मोटरसाईकलमा लिफ्ट दिन सकिएन । आज ठुलो पानी परेकोले भाडा बसमा चढें । अर्को स्टपमा उनै नानी पनि बस चढीन् । मलाई देखेर उनी पनि लजाइन । आज म पत्ता लगाई छोडछु उनी कहाँ […]
पशुपतिनाथको दर्शन पछि गेटमै साथी भेट भयो । ओ हो के छ है, तिम्रो हाल खबर ?( बुद्धिप्रसादले ढाप मार्दै साध्यो नरम प्रसादलाई) के हुनु म त आजित भए । खै स्थानीय चुनाव पनि कहिले हुने हो ? किन चाहियो चुनाव सुनाब बुद्धि प्रसाद रंन्कियो […]
धुरमुसे हात पाखुरा बलियो भएर पनि कहिल्यै मेहनति भएर काम गरी खानुभन्दा अरुलाई रिझाएर मागेर खान जानेका चतुर व्यक्ति हुन । दिनहु नयाँ एक दातालाई रिझाएर पेट भर्नु उसको दिन चर्या थियो । सायद दोह–याएर कोहीसँग हार गुहार गरेन । जोसँग माग्दछ उसले कहिल्यै नाई […]
जुवाडेको कथा बिहानै ८ बजे प्रहरीले तास खेल्ने र हेर्नेलाई पुलिस चौकिमा लगेको थियो । लाने र जानेहरु अब के गर्ने अन्यौलमा थिए । जाने मध्ये एकले घरमा फोन गरयो सधै पुलिसले समाएर लगोस भन्थ्यौ हैन आज त समायो ,म त चौकिमा छु । भात […]
नेपालीले भोगेका र भोग्नु पर्ने पिडा
असारको बर्षा सुरु भएर पनि गाँउघरमा रोपाईको रमझम र चटारो छैन । युवाहरु पलाएन भएर , पानी भएर पनि खेतका ग–ह्राहरु हिलाम्मे छैनन् । गोरु भएर पनि जोत्ने हलीहरु छैनन् । धान रोप्ने महिलाहरुका चुरा बजेका छैनन् खेतमा पाईला टेक्ने उनिहरुको जागर छैनन् । परार […]
बिस्केट जात्राको विशेष चहल पहल बाटो ठेलम ठेल भीडमा साना नानीहरू आमा बुबालाई हावा भरिएको बेलुन किनिदिन मरिहत्ते गरिरहेका छ । भैया प्रति बेलुन २५ मा बेचिरहेका छन । ओ भैया जात्रा सुरु भयो ? कहाँ हो जात्रा हुने ठाउ ? भैयालाई जात्राको के सरोकार […]
नयाँ बर्षको पात्रो बनेर
सदाबहार आयौ तिमी पात्रो बनेर । न त केही गर्न सक्छौ, न त केही गराउन नै ।। केवल कोठाहरूको खालि भित्ताहरूको काटीमा, झुन्डिएर वर्षौ बस्न सक्छौ । स्वार्थीभावनाका अनगिन्ती स्वरुपमा, तिमीलाई ढाल्ने गर्छन् आफ्नै स्वार्थमा ।। मठ मन्दिर, देबि देवताका फोटो र तिथि मिति शुभ […]
सधै बिहान एक कप मात्र बाहिर पसलमा चिया खाने मेरो बानी किन हो किन डेरामा पाहुना जस्तै आएको बुढीको हातको चिया खान मन लाग्यो । खै चिया खान सकिएला बुढीले जसोतसो चिया बनाएर दिइन । म झ्यालनिर बसेर चिया खान थालेँ, पल्लो घरको झ्यालको पर्दाबाट […]